#Mauro Icardi ayaa diiday inuu ciyaaro Europa League ka dib markii laga xayuubiyay kabtanimada Inter, isagoo mustaqbalkiisa shaki ku jira | Get Latest News From Horn of Africa |
#Mauro Icardi ayaa diiday inuu ciyaaro Europa League ka dib markii laga xayuubiyay kabtanimada Inter, isagoo mustaqbalkiisa shaki ku jira
Mauro Icardi ayaa diiday inuu u ciyaaro Inter Milan kulankiisii ​​ugu dambeeyey ee Europe League ee ay la ciyaarayaan Rapid Vienna Khamiistii ka dib markii laga xayuubiyey kabtannimadda kooxda.
Gool dhaliyaha xulka qaranka Argentina iyo kooxda Inter Milan ee Mouro Icardi ayaa gadood sameeyay kadib markii uu cadeeyay in aanu qayb ka noqonayn kooxdiisa Inter Milan ee kulanka Europa League waxaana laga xayuubiyay kabtanimadii Inter Milan iyada oo waliba tababare Luciano Spalletti uu si xaqiiq ah warkan u soo bandhigay.
Markii hore warbaahinta dalka Talyaaniga ayaa shaaciyay in Mouro Icardi laga saaray liiska ciyaartoyda kooxda Inter Milan ee kulanka Europa league ee ay wajihi doonaan kooxda Rapid Vienna laakiin Luciano Spalletti ayaa cadeeyay in Icardi uu ahaa kii naftiisa ka saaray liiskan balse ayna iyagu ka saarin.
Icardi oo waqti dheer lala xidhiidhinayay kooxda Real Madrid isla markaana ay kooxo Premier league ahi isha ku hayeen ayaa hadda u muuqda in uu colaad la galay maamulka kooxdiisa kadib markii uu qaatay go’aanka ah in aanu u ciyaarin Inter Milan kulanka Europa League ee Rapid Vienna.
Luciano Spalletti oo cadaynaya in kabtanimadii laga xayuubyay Icardi ayaa isaga oo saxaafada la hadlayay ka hor kulanka Europa League waxa uu yidhi: “barri waxay noqon doontaa ciyaar aad muhiim u ah. Waqti ayaanu heli doonaa, intaas kadib aan kala cadayno booska Icardi. Waxa uu ahaa go’aan adag oo xanuun badan, laakiin waxa uu ahaa mid uu qof kastaaba taageeray oo loo sameeyay wanaaga kooxda Inter”.
Intaa kadib Luciano Spalletti ayaa cadeeyay in Icardi uu ahaa ka diiday in uu kooxdiisa la safro isla markaana uu liiska kooxdiisa ugu yeedhay wuxuuna yidhi: “Isaga ayuu ahaa ka aan doonayn in uu kooxda ku soo biiraa. Isaga waa loo yeedhay, wuu niyadjabsanaa, sidoo kale anaga ayay nagu adkayd in aanu go’aankan gaadhno oo aanu isaga u sheegno”.
Inter Milan oo xili ciyaareedkan ka soo hadhay UEFA Champions League kadib markii ay kaalinta saddexaad groupkeeda kaga dhamaysatay ayaa kulanka Rapid Vienna waxay wajihi doontaa iyada oo aanu Mouro Icardi kooxdeeda ka mid ahayn